Inona ny fifandraisana? Famaritana sy ohatra
Math Tutorials & Courses
Ahoana ny fampiasana ratios amin'ny math
Ao amin'ny matematika, ny tahan'ny isa dia mampitaha ny isa 2 na mihoatra izay manondro ny habeny. Azo heverina ho toy ny fomba hampitahana ny isa amin'ny fizarana. Amin'ny isa roa, ny sanda voalohany dia midika hoe ilay mpikomy ary ny faharoa dia ny vokatra.
Ratios amin'ny fiainana andavanandro
60 kilaometatra isan'ora (ny "per" teny dia manondro avy hatrany ny tahan'ny)
Vidiny isaky ny hafatra an-tsoratra
1 ka hatramin'ny 28.000.000 no vintana hahazo ny loteria
3 mpampianatra isaky ny 76 mpianatra
Ahoana ny fanoratana ny fifandraisana
Tsara ny manoratra ny tahan'ny fampiasana ampiana iray, toy ny fampitahana an'io, na ampahany . Ao amin'ny matematika, matetika kokoa ny manatsotra ny fampitahana amin'ny isa kely indrindra. Noho izany, raha tokony hampitaha ny 12 hatramin'ny 16 ianao, dia azonao atao ny mizara isa 4 isaky ny 3 ka hatramin'ny 4.
3 hatramin'ny 4
0,75 (mety ho azo atao ihany koa ny decimal, na dia kely aza no ampiasaina)
Raha angatahana ianao hametraka valiny "ho toy ny tahan'ny", dia aleo ny tanjon'ny ampongabendanitra na ny ampahany amin'ny alàlan'ny fampitahana amin'ny teny verbal.
Ny tombontsoa lehibe amin'ny fampiasana ny tsipika momba ny ratios dia hita rehefa mampitaha ny soatoavina roa. Ohatra, raha manomana fifangaro iray izay mitaky ampahafolo 1, vinaigy venty, ary ampahany folo, dia azonao atao ny maneho ny ohatry ny solika ho vina-rano amin'ny 1: 1: 10. Ilaina ihany koa ny maneho ny fatran'ny zavatra iray. Ohatra, ny habetsaky ny sakan'ny hazo dia mety ho 2: 4: 10 (efatra na efatra eo ho eo).
Mariho fa ireo tarehimarika ireo dia tsy manatsotra izany toe-javatra izany.
Ohatra tsotra dia mampitaha ny karazana voankazo ao anaty vilia iray. Raha misy poma 6 ao anaty vilia misy voankazo 8, ny tahan'ny poma ho an'ny voankazo dia 6: 8, izay miteraka 3: 4.
Raha roa ny voankazo dia oranges, dia mitovy ny 6: 2 na 3: 1 ny tahan'ny poma.
Ohatra: Dr. Pasture, veterinaria teratany any ambanivohitra, dia biby roa ihany no karazany - ombivavy sy soavaly. Tamin'ny herinandro lasa izy dia nanangona ombivavy 12 sy soavaly 16.
Fizarana amin'ny ampahany ny ampahany: Inona ny ohatr'ireo omby amin'ny soavaly izay nentiny?
Tsindrio: 12:16 = 3: 4
Ho an'ny ombivavy 3 izay notanterahin'ny Dr. Pasture, dia nitarika soavaly 4 izy.
Fizarana ho an'ny Ratsy manontolo: Inona no ohatr'ireo ombivavy izay nentiny tamin'ny isan'ny biby nomaniny?
Tsindrio: 12:30 = 2: 5
Azonao atao ny manoratra toy izao:
2 hatramin'ny 5
Ho an'ireo biby 5 izay nozahan'ny Dr. Pasture, dia ny ombivavy roa.
Ampiasao ny fampahalalana demografika momba ny tarika mpanao diabe mba hamenoana ireto fampiharana manaraka ireto.
56 mpilalao varahina
1. Inona ny tahan'ny ankizilahy sy ankizivavy? 2: 3 na 2/3
2. Inona no ohatr'ireo olona vaovao amin'ny isan'ny mpikambana ao amin'ny tarika? 127: 300 na 127/300
3. Inona no ohatr'ireo mpanao percussionists amin'ny totalin'ny mpikambana ao amin'ny tarika? 7:25 na 7/25
4. Inona ny tahan'ny tanora amin'ny zokiolona? 1: 1 na 1/1
5. Inona ny tahan'ny sophomores hatramin'ny zandriny?
63:55 na 63/55
6. Inona no ohatr'ireo olon-dehibe amin'ny zokiolona? 127: 55 na 127/55
7. Raha nandao ny fizotry ny kitapo ny mpianatra 25 mba hiditra amin'ny fizarana percussion, inona no mety ho fiantraikan'ny fifamoivoizana amin'ny kitapo?
Fivoahan'ny biriky 160 - 25 volavolan-dava = 135 vatan-kazo
109: 135 na 109/135
Ahoana no hamaritana raha ny laharana dia laharana voalohany
Fampiasana Percents - Fanamarinana Komisiona
Miova eo amin'ny Base 10 hatramin'ny Base 2
Ny fitsipiky ny fampiasana integrateur mavitrika
Fomba fisainana tsotra
Manitsaka ny hetra amin'ny fandaniana ara-bola
Ahoana ny fomba hamahana rafitra fitsipika mitovy
Fahalalahana ary inona no mety ho vintana?
Manombatombana ny hetra aloan'ny federa
Matematika: Mila mianatra lesona ianao
Atoms Diagrams Mampiseho Elektronika Configuration of Elements
Ahoana no hamantarana ireo teny famaritana
Hitanisa ny Commonwealth
Ny Fahamarinana Aorian'ny Famoronana Manandaza Vitsivitsy
Sima de los Huesos (Espaina) - Lower Paleolithic Sierra de Atapuerca
Ny 'Walden' an'i Thoreau: 'Ny ady amin'ny Antsa'
Torolalana ho an'ny mpitsidika mba hahafantarana ny Tempoly Ambony Ambony
Antony mahatonga ny Eyestrain
'Hemlock Grove': Taratasy sy endri-tsoratra Netflix
'Hokey Pokey' Chords
Tantara an-tsarin'ny Discus
University of Dayton GPA, SAT sy ACT Data
Ny Dinosaurs sy ny biby fahiny tany Kansas
Topy horonan-tsary kristiana ho an'ny ankizy
Lalao Olaimpikan'ny Lalao Olaimpika
How to Beat Jan-Ove Waldner at Tennis Table
Ahoana ny fampiasana "Jamais" amin'ny teny frantsay